Global Voices teny Malagasy » Mpanao Sariitatra Niakatra Fitsarana Noho Ny Fanaovana Ny Sarin’i Jesoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Mpanao Sariitatra Niakatra Fitsarana Noho Ny Fanaovana Ny Sarin'i Jesoa
Voadika ny 09 Desambra 2017 5:05 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Jordania, Palestina, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Emad Hajjaj. Sary tao amin'ny pejiny Wikipedia (CC-BY-SA)
Emad Hajjaj. Sary nozaraina tao amin'ny pejin'ny Wikipedia sariitatra (CC-BY-SA)
Miatrika fiampangana noho ny fanevatevana finoana sy famporisihana fifandonana ara-pivavahana tamin'ny alalan'ny sariitatra maneho an'i Jesoa ilay mpanao sariitatra Palestiniana-Jordaniana.
Nampanantsoin'ny mpampanoa lalàna Jordaniana tamin'ny 31 Oktobra i Emad Hajjaj  mba hatao fanadihadiana, rehefa nisy olona nametraka fitarainana izay niampanga azy ho “manevateva fivavahana”. Mampiseho an'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana miampanga ny Patriarka ankehitriny ao amin'ny Eglizy Ortodoksa ao Jerosalema, ny Patriarka Theophilos III, ilay sariitatra, izay navoaka tao amin'ny Twitter sy Facebook.
“Izaho no Kristy, zanak'i Maria, ary mandà ny Patriarka Theophilos III sy ireo rehetra izay niaraka taminy tamin'ny fivarotana ny fananan'ny Eglizy Ortodoksa Grika mendri-kaja ho an'ny Isiraeliana mpibodo tany”, hoy ny fanazavan'ny sariitatra.
Nanao ny sariitatra i Hajjaj ho setrin'ny tatitra fa nivarotra ny fananan'ny fiangonana tamin'ireo vondrona Israeliana ny Fiangonana Ortodoksa ao Jerosalema mba handoavana ny trosan'ny fiangonana.
Navoaka tamin'ny 29 Oktobra tao amin'ny gazety Al-Araby Al-Jadeed sy ny kaonty media sosialin'i Hajjaj ny sariitatra.
Famadihana ny Kristianisma sy ny kristianina ny fivarotana ny fananan'ny Eglizy ortodoksa ao Jerosalema amin'ny mpibodo tany.
Niasa niaraka tamin'ireo gazetim-paritra sy gazety ao an-toerana ary gazetiboky maromaro mamoaka ny sariitatrany ity mpanao sariitatra ity. Miresaka politika ao Afovoany-Atsinanana ny asany amin'ny ankapobeny, anisan'izany ny fibodoan'ny Israeliana ireo sisintany Palestiniana.
Navotsotra ankehitriny i Hajjaj ary mbola tsy voampanga tamin'ny fomba ofisialy. Na dia izany aza, araka ny filazan'ny sendikà misolo tena ny mpanao gazety Jordaniana, mety ho voampanga  amin'ny “fitarihana fifandirana ara-pinoana” eo ambanin'ny Lalànan'ny Heloka An-tserasera  ao amin'ny fanjakana izy. Nasiam-panitsiana vao haingana ny lalàna ary nampiana sazy an-tranomaizina manomboka herintaona hatramin'ny dimy taona ho an'ireo izay voaheloka noho ny “fitarihana fifandirana ara-pinoana, ara-pivavahana, ara-poko sy ara-paritra”.
Ny lalàna Jordaniana toy ny fehezan-dalàna famaizana, ny Lalànan'ny Heloka An-tserasera sy ny Lalànan'ny Gazety sy ny Famoahana ny lalàna dia ahitana famerana marobe ho an'ireo mpiserasera maneho ny heviny amin'ny aterineto. Anisan'ireo famerana ireo ny famoahana sariitatra na “vaovao diso na manitatra” momba ny fianakavian'ny mpanjaka, ny famoahana votoaty izay heverina ho fanompana finoana na mandika ny “soatoavina silamo”, ary ny fanalam-baraka manampahefam-panjakana, mpiasan'ny governemanta sy ny tafi-panjakana.
ny fiampangana rehetra momba ny fanevatevana fivavahana dia tokony esorina ao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana; lahatsoratra manasazy [izy ireo] izay manitsakitsaka ny zo haneho hevitra malalaka sy ny fahalalahana hanan-kevitra. Mitsangana miray hina amin'i Emad Hajjaj aho
Tamin'ny herintaona, notsaraina i Nahed Hattar mpanoratra noho ny fizarana sariitatra tao amin'ny Facebook, izay mamazivazy ny fomba fijerin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona extremista sy mahery setra ISIS an'Andriamanitra sy ny paradisa. Nahazo fandrahonana maro i Hattar taorian'ny famoahana ilay sariitatra, ary voampanga ho “manevateva ny fahamasinana”. Tamin'ny 25 septambra 2016, maty nisy nitifitra  tao ivelan'ny fitsarana tao Amman renivohitra izy raha saika hotontosaina ny fotoam-pitsarana azy.
Niteraka fanontaniana tao Jordana ny famonoana an'i Hattar, izay mikasika ny anjara andraikitry ny governemanta amin'ny fananganana tontolo izay rahonana sy tampenam-bava ireo manana fomba fijery vitsy an'isa. Raha ny marina, ny governemanta Jordaniana no nitondra ny raharaha fanenjehana an'i Hattar, ary na dia teo aza ny fandrahonana ny ainy, tsy nanome fiarovan'ny polisy azy ny manampahefana.
Mandinika momba ny politikan'ny governemanta Jordaniana amin'ny fanoherana ny kabarim-pankahalàna no sady manasazy ny fahalalaham-pitenenana, Reem Al Masri, manam-pahaizana momba ny fitantanana aterineto miaraka amin'ny fikambanana media 7iber (tononina hoe Hiber) nanoratra hoe:
Tahaka ny raim-pianakaviana mandà ny zanany noho ny fitondrantena tsy mendrika ary tsy mijery ny anjara asany tamin'ny fisian’ izany fitondrantena ratsy izany, mihodina amin'ny kabarim-pankahalàna ny fanjakana.
Rehefa mandinika ny famaritana natolotra momba ny kabarim-pankahalàna izahay, dia manontany tena hoe: natao hanaratsy ny iray amin'ireo vondrom-piarahamonina ve ny fepetra raisin'ny governemanta na manaisotra ny fahalalahana fototra ho an'ireo vondron'olona sasany anisan'ireo manao izay hipongaran'ny kabarim-pankahalana? […] Isaky ny mandrahona ireo izay miditra amin'ny lazaina fa “kabarim-pankahalàna” ny fanjakana, dia mila mitodika amin'ny zava-misy fototra isika: ampijaliana amin'ny tontolo politika izay manilika ny fahamaroana ny kabary manohitra ny fivavahana, ny foko sy ny vondrona ara-pananahana ary tsy mampiditra ny fiarahamonina amin'ny famaritana izany karazana kabary izany
Tamin'ny famotorana an'i Hajjaj, nampiseho indray ny manampahefana Jordaniana fa tsy mikasa hanangana tontolo azo antoka izy ireo izay leferina ny fomba fijerin'ny vitsy an'isa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/09/110768/
 tatitra : https://medium.com/@daoudkuttab/christian-palestinians-unhappy-with-the-greek-orthodox-patriarch-7a91b04d4405
 voampanga : https://www.alaraby.co.uk/medianews/2017/10/31/التحقيق-مع-الزميل-عماد-حجاج-اليوم-في-عمان
 Lalànan'ny Heloka An-tserasera: http://smex.silk.co/page/Jordan-adopts-new-anti-cybercrime-law
 famerana marobe : https://www.7iber.com/wp-content/uploads/2013/11/Infographic_Laws01-01.jpg
 maty nisy nitifitra: https://globalvoices.org/2016/09/26/jordanian-authorities-impose-media-gag-after-writers-killing/
 nanoratra : https://www.7iber.com/politics-economics/pursuing-hate-speech-where-to-start/